Hafaliana hafahafa amin'ny taona vaovao ho an'ny tetika 'vahiny' 3
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Hafaliana hafahafa amin'ny taona vaovao ho an'ny tetika 'vahiny' 3
by Timothy Rawles Janoary 1, 2019
by Timothy Rawles Janoary 1, 2019 991 hevitra
Zara raha tamin'ny taona 2019 izao ary efa miomana amin'ny 4 Jolay ny vahoaka ao Hawkings. Eny, efa miomana izy ireo us ho an'izany satria namoaka teaser hafahafa i Netflix ho an'ny vanim-potoana ho avy Zavatra tsy dia mahazatra 3.
Ny fihenam-bidy hafahafa ho an'ny '85 ao amin'ny horonan-tsary Times Square dia naseho voalohany tamin'ny famantaran'ny mamatonalina EST niaraka tamina afisy vaovao ho an'ilay andiany izay efa nitazona antsika tamin'ny afomanga, gilasy ary The Demogorgon.
Netflix dia mivezivezy miaraka aminay amin'ny teasers amin'ity fidirana andiany ity. Teknika sarimihetsika blockbuster fahavaratra taloha izay tsy ananan'ny mpanatontosa sarimihetsika fotsiny ny zavatra ho avy nefa tsy manome na inona na inona feno.
Ny sombin-kaonty farany nanafaran'izy ireo anay dia ny fiandohan'ity volana ity rehefa namoaka ny lohatenin'ireo fizarana rehetra izy ireo.
Na ahoana na ahoana, miomàna amin'ny tenanao mandritra ny herintaona misy promos sy hype mavesatra. Tsy izany ihany vahiny Things manome toko iray hafa antsika, fa toy izany koa IT ary na dia Game ny ny seza fiandrianan'ny.
Sambatra 2019 daholo!